भिडियो | Nepali Virals
मार्च 28, 2016 | भिडियो, समाज, हट टपिक्स
भूत भन्ने बितिक्कै हाम्रो आङ् जिरिंग हुन्छ, रौहरु ठाडो हुन्छन । अझ रातको समयमा भूतको कहानी र कथाहरु सुन्नु पर्छ रातभर निन्द्रा लाग्दैन । कोही कोही त राती नै भूत भनेर चिच्याउछन् । किचकन्याले सताएको प्रसङ्गहरु त थुप्रै सुनिन्छ ।
भूत भन्ने बितिक्कै हाम्रो दिमागमा एउटा अनौठो भयानक डरलाग्दो दृश्य छचल्किन थाल्छ । तपाईलाई लाग्न सक्छ साच्चीकै भुत हुन्छन् त ? विश्वमा सुचना र प्रविधीले निकै फड्को मारीसके पनि मनिसहरुको मन परिर्वतन भएको छैन् । समाजमा भुतको चर्चा गरेको तपाई हामीले सुन्नेगरेकै छौ । तर विश्वास की नगर्ने भुत हुन्छ भनेर हेलोविन देखी चिनियाँ घोस्ट फेस्टिवल सम्म भुतको खुव चर्चा हुने पाईन्छ ।
तर भुतको अस्तित्व ’boutमा लडाई भने हजारौ वर्षदेखि जारी छ । भुत छ र छैन् भनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । देखे भोगेकाहरुको कहानी र कथालाई मान्ने हो भने भूत धेरै प्रकारका हुन्छन । पछिल्लो समय जन घनत्व बढेसंगै भूत हट्दै गएको धेरैको बुझाइ छ । आखिर जे होस्, कतिपयलाई बिश्वास लाग्ला त कतिपयलाई नलाग्ला तर यहाँ एक भिडियोमा नेपालमा सबै भन्दा बढी भूत भेटिने ५ ठाउँको चर्चा गरिएको छ । जसमा राजदरबारदेखि सागरमाथासम्मका ठाउँहरु समेटिएका छन् ।
८ फोटोमा हेर्नुस ज्वालामुखी चट्टान भित्रको रोचक जीवनशैली (भिडियो)
मार्च 28, 2016 | फोटो, भिडियो, हट टपिक्स
मान्छेहरुको सिर्जना र चाहना पनि अनेक खालको हुन्छ । कतिपय सिर्जना र चाहनाहरु यस्तो हुन्छन जुन पत्याउनै मुस्किल हुन्छ । यस्तै एउटा सिर्जना भएको छ अमेरिकाको कोस्टारिकामा । त्यहाका एक व्यक्तिले जमिनमुनी रमणीय जीवनशैली बिताईरहेका छन् । उनले घर मात्रै बनाएका छैनन् त्यस भित्र अनेक रोचक कलात्मक सिर्जनाहरु समेत बनाएका छन् ।
कोस्टारिकाको सेन इसिड्रो डी परेज जेलेडन निवासी म्यानुअल ब्यारेन्ट्सले १२ वर्षसम्म लगातार ढुंगा काटेर पहाडभित्रै गुफाजस्तो तर निकै सुन्दर घर बनाएका छन् । उनको यस घरमा ३ वटा बेडरुम, १ डाइनिङ रुमसहितको सुविधा छ, जुन एक आलिशान महलमा उपलब्ध हुन्छन् ।
म्यानुअलको परिवार २ हजार स्क्वायर फिटमा बनेको यस घरमा रहन्छ, जसलाई ज्वालामुखी चट्टान काटेर बनाइएको हो । उनले यस घरको नाम टोपोलाण्डिया (Topolandia) राखेका छन् । यी तस्बिरहरु एक फोटोग्राफरले क्लिक गरेका हुन्, जसलाई म्यानुअलले आफ्नो घर देखाउन निमन्त्रणा दिएका थिए ।
यसका अलावा एउटा ठूलो डाइनिङ रुम पनि छ, जसमा उनको पूरा फ्यामिली अटाउँछ । उनले आफ्ना यादहरुलाई समेट्नका लागि एउटा कोठामा टेलिफोन, सिडी, फेन्सी कप तथा नोटहरु राखेका छन् । म्यानुअलको यो घरभित्र स्केल्टन तथा रंगी-बिरंगी कार्टूनहरु बनाईएको छ ।
कृषिमन्त्रीलाई धुर्मुसको झापड ! (हेर्नुस भिडियो)
मार्च 27, 2016 | प्र्यांक, भिडियो, हट टपिक्स
फिल्म हेर्न हलमा पुगेका कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल भक्कानिएर रोए, त्यो पनि टिभीको क्यामेराकै अगाडि । त्यसपछि के चाहियो र पत्रपत्रिका, अनलाइन, टिभी सबैतिर मन्त्री गजुरेलको रुवाइ भाइरल बन्यो । कतिपयले उनको रुवाइलाई टोपलेको भनेर संज्ञा दिए भने कतिपयले कोमल मन भएको मन्त्री भनेर बचाउ पनि गरे ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको कथा रहेको राहदानी चलचित्र हेरेर कृषिमन्त्री गजुरेल रोएका हुन् । बिहीबार काठमाडौंको सिटी सेन्टरमा राहदानी चलचित्र हेरेर फर्केका उनी एक टिभीलाई अन्तरबार्ता दिदा दिंदै भक्कानिएका थिए ।
नेपालमै केही गरौं भनि ऋण लिएर गाई पालन गरेका युवा गोठमा गाई मरेपछि विभिन्न समस्या परेर बाध्य भई विदेश जानु परेको चलचित्रको दृष्यले मन्त्रीको मन पोलेको रहेछ । स्मरणीय त के हो भने उनी १० बर्षसम्म युद्द गरेर आएका नेता हुन् । यसैकारण पनि कतिपयले उनको रुवाइलाई ‘स्वाङ्’ परेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । ‘जनयुद्दमा हजारौ नेपाली मर्दा वास्ता नगर्ने अहिले नाटक गर्ने’ कतिपय यस्तै भनिरहेका छन् ।
त्यसो त सर्वसाधारणले मात्रै होइन कलाकारले पनि उनको रुवाइलाई मज्जैले उडाई दिएका छन् । मन्त्री गजुरेलको नक्कल गर्दै हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले दिएको अन्तरबार्ता भिडियो युट्युब भाइरल बनिरहेको छ ।
यसरी रोएका थिए मन्त्री गजुरेल
उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई यसरी ध्वस्त पार्ने (हेर्नुस भिडियो)
मार्च 27, 2016 | भिडियो, हट टपिक्स, हाँसोउठ्दो
अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको द्वन्द चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । यस अघि अमेरिकाको न्युयोर्क सहर उडाउने चेतावनी दिएको कोरियाले यस पटक ‘अन्तिम अवसर’ भन्दै ४ मिनेट लामो चेतावनीयुक्त प्रोपोगान्डा भिडियो सार्वजनिक गरेको छ ।
भिडियोमा मिसाइल आक्रमणमार्फत अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसी नष्ट गरेको देखाइएको छ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार भिडियोमा ‘अमेरिकाले अब दुईमा एक छनौट गर्नु पर्ने छ, अमेरिकाको अवशेष यो धर्तिमा रहने कि सधैको लागि समाप्त हुने, यो सबै अमेरिकाको हातमा छ’ भनिएको छ ।
उत्तर कोरियाको यो भिडियो अमेरिका र चिर प्रतिद्वन्दी दक्षिण कोरियाको बिरुद्दमा सार्वजनिक गरिएको हो । गएको जनवरीमा परमाणु परीक्षणका साथै लामो दूरीमा मार हान्न सक्ने रकेट प्रक्षेपण गरेको उत्तर कोरियाले सार्वजनिक गरेको प्रोपोगान्डा भिडियोले अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, दक्षिण कोरियालाई थप तनाब दिएको छ ।
दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले उत्तर कोरियाको सिमा नजिक संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएकाले बिरोध जनाउदै उत्तर कोरियाले पछिल्लो पटक चेतावनी स्वरूप शक्ति प्रदशन गर्दै आएको छ । दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको सैन्य प्रदर्शन तत्काल रोक्न पटक पटक चेतावनी दिंदा पनि नरोकेपछि उत्तर कोरियाले हिँसाको बाटो अंगाल्न खोजेको जनाएको छ ।
उत्तर कोरियाका राष्टपति किम जोंङ्ले अमेरिका र दक्षिण कोरिया माथि जुनसुकै बेला पनि आक्रमण गर्न पर्ने भएकाले तयार रहन सैनिकहरुलाई आदेश दिइसकेका छन् ।
बिश्वकै खराब १० झण्डा, नेपालको पनि (भिडियो)
मार्च 25, 2016 | भिडियो, समाज, हट टपिक्स
कुनै पनि देशको सबै भन्दा ठूलो पहिचान हो- झण्डा । झण्डाले नै देशलाई चिनाउछ । कुनै पनि नागरिक आफ्नो देशको झण्डाको दुरुपयोग गरेको चाहदैन ।
तर यहाँ दुई जना बिदेशी नागरिकले बिभिन्न १० देशका झण्डालाई बिश्वकै खराब झण्डा भनेर भिडियो बनाएका छन् । ज्याक्स फिल्मले युट्युबमा हालेको यो भिडियो ६ लाख बढी पटक हेरिएको छ । यो कुनै अध्ययन, सर्वेक्षण र अनुसन्धान भन्दा पनि एउटा रमाईलोका लागि बनाइएको ‘कमेडी’ भिडियो हो ।
उनीहरुले बनाएको सूचीमा नेपालको झण्डा दशौ स्थानमा रहेका छन् । अन्य झण्डाहरु ग्रिनल्यान्ड, अलास्का, एन्टीगो, कोलोम्बिया, न्युमेरो लगायत देशका झण्डा रहेका छन् ।
नेपाली झण्डाका ’boutमा
चारकुने आकार नभएको एक मात्र राष्ट्रिय झण्डा हो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा । नेपालको झण्डा दुई त्रिकोण (एक माथि अर्को) मिलेर बनेको छ । माथिल्लो त्रिकोणमा अर्ध चन्द्र र तल्लोमा सुर्य छ, जसले आकाशमा चन्द्र र सुर्य रहुन्जेल नेपाल रहीरहने कुरालाई जनाउँछ । नीलो किनारा शान्तिको प्रतिक हो र सिम्रिक रङ नेपालको राष्ट्रिय रङ हो ।
सनातन धर्मावलम्बी हिन्दूहरूको मान्यताअनुसार छत्र (छाता), ध्वज (ध्वजा वा झ्ण्डा), चामर (चमर वा पङ्खा) र कार्मुक (धनु) सनातनदेखि नै राष्ट्र वा राज्यका राजकीय प्रतीक वा चिह्नका रूपमा चिनिँदै आएका हुन्। राजाहरू आ-आफ्ना राष्ट्र वा राज्यका प्रतीक वा चिह्न लिएर राजकीय यात्रामा निस्कन्थे ।
लडाइँका मैदानमा पनि कुनै राजाको छत्र, ध्वज, चामर वा कार्मुक भाँचिदिन सफल हुनुको अर्थ हुन्थ्यो, त्यस राज्य उपर विजय। राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा “म जसै अर्काको छत्र-भङ्ग गर्न भनी जान्छु, त्यसैवेला मेरो छत्रलाई भङ्ग गर्न यहाँ अर्को राजा आयो भने के-कसो होला?” भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। यिनको यस भनाइबाट त्यतिवेला राष्ट्रध्वज वा राष्ट्रिय-झ्ण्डाको भन्दा राजछत्रको बढी महत्व हुने गरेको छनक पाइन्छ।
नेपालमा राष्ट्रिय-ध्वजा वा राष्ट्रिय-झण्डाको चलन कहिलेदेखि शुरु भयो, निश्चित भन्न सकिँदैन। लिच्छवि राजाहरूले आफूलाई लिच्छवि-कुलकेतुः अर्थात् लिच्छवि-कुलको झ्ण्डाजस्तो भनी चिनाउने गरेका थिए। यसबाट त्यतिवेला नै नेपालमा केतु अर्थात् ध्वजाको प्रचलन थियो भन्न सकिन्छ। इन्द्रजात्राको दिन इन्द्रध्वज फहराउने परम्परा आजसम्म चलिआएकै छ ।
हाम्रा सम्पूर्ण वैदिकवाङ्मय सूर्य तथा चन्द्रका गुणगानले भरिभराउ छन्। पहिलेका राजाहरूले आफ्नो राजवंशलाई सूर्य-वंश वा चन्द्र-वंश मान्दै आएका थिए। वि.सं. ७९२ (संवत् १५९)मा राजा जयदेव (द्वितीय)ले पशुपतिको मन्दिरमा राखेको शिलालेखमा “ब्रह्माका पनाति भगवान् सूर्यबाट आफ्नो इक्ष्वाकु-कुलको आरम्भ भई यसै कुलमा आफ्नो जन्म भएको” उल्लेख गराएका छन् ।
लिच्छवि राजाहरूले आफ्नो उच्चताको प्रतीकका रूपमा राष्ट्रको झ्ण्डामा पनि सूर्यको आकृति नै अङ्कित गराएको हुनुपर्छ । त्यतिवेलाका भारतीय राजाहरूले आफ्ना झण्डाहरूमा उच्चताको प्रतीकका रूपमा गरुड वा हनुमानका चित्रहरू अङ्कित गराउँथे। त्यसैले उनीहरू हनुमद्-ध्वज वा गरुड-ध्वज भनेर चिनिन्थे। लिच्छविकालमै नेपालको राजसत्तामा आएका आभीरवंशी अधिनायकहरूले आफ्नो वंशलाई सोम-वंश वा चन्द्र-वंशको रूपमा चिनाउँथे ।
तीन बर्षीय बालिकाको प्रेम गीत भाइरल (हेर्नुस भिडियो)